Nhoroondo yekambani - Anping County Ansheng Wire Meshes Chigadzirwa Co, Ltd.
Anping County Ansheng Wire Meshes Chigadzirwa Co, Ltd. yakavambwa muna 1996 na chen shun feng,
Muna 1996, raive diki dura rehardware muGuangzhou, yainyanya kuita mhangura mesh uye isina simbi waya waya
Muna 1998,iyo kambani yakamisa nickel mesh department department. Nezve nickel mesh, kupinza maviri annealing mavira uye akanaka-mhando mafesi akawedzerwa, Nyowani nickel yakanamirwa pamusangano musangano, uye waya kuruka muchina. 11 seti yeGerman kuruka michina yakaunzwa kunze kuti iumbe waya kudhirowa, mesh uye kudzika kugadzirisa. Yakabatanidzwa yekugadzira system.
Muna 2000, Kambani yakagadzira chivakwa chefekitori che20,000m2 muAnping, kugadzirwa kwakakwenenzverwa, kugadzirisa, kuongorora kwehunhu, kurongedza uye kupedzisa, imba yekuchengetera uye mamwe madhipatimendi ekuwedzera nzvimbo yehofisi.
Kubva 2001 kusvika 2005, iyo kambani yakavaka nyowani epoxy mesh musangano uye isina simbi mesh musangano, uye yaro yekutengesa kunze kwegore yakasvika mamirioni zana.
2005-2010 Musangano uyu wakashandurwa kuita musangano usina guruva wepepein resin pendi
2010-2015 nevatengi veGerman vakagadzira chubhu yekutenderera uye kurova mesh akateedzana, mota gearbox firita mesh akateedzana.
Muna 2016, Shijiazhuang Hofisi yakavambwa,
Muna 2017, iyo tambo mesh yakadzika yekugadzirisa dhipatimendi yakavambwa kuti ipinde mupurasitiki polymer filtration indasitiri, epurasitiki extrusion indasitiri, kupinza michina yekuGerman yekutengesa, michina yekucheka laser, uye yakawedzera nguva yekuendesa uye kuvimbiswa kwemhando.
Muna 2018, kuvandudzwa kweguruva firita yezvinhu muindasitiri yepurasitiki uye kusimudzira kwekupeta firita zvinhu zvakasimbiswa.
Muna 2019iyo yekuchenesa mvura uye mvura yekuchenesa dhipatimendi yakavambwa kukudziridza iyo Yakawedzerwa simbi mesh dzakateedzana firita yepakati fomati.